Fitaovana azo ahodina: toetra, fampiasa ary kaontenera | Fanavaozana maintso
Fitaovana azo ahodina
Portillo Alemanina | 22/04/2021 13:03 | fanodinana
Raha resaka fanodinana indray dia tsy maintsy fantarintsika fa misy karazana fako sy fitaovana samihafa. Maro amin'ireo fitaovana azo averina ampiasaina tsy maintsy ekena izy ireo teo aloha mba hisarahana sy hamerenana amin'ny laoniny. Ireo fitaovana azo averina ampiasaina dia ireo izay azo ampiasaina indray aorian'ny fampiasana azy ireo indrindra noho ny fitsaboana fanodinana taloha. Izy io dia mety amin'ny endriny be pitsiny toy ny endriny madio indrindra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fampiasana ireo fitaovana azo averina simba ary inona izany.
1 Fampiasana fitaovana azo ampiasaina
2 Fametrahana tahiry azo haverina
2.1 Plastika sy kaontenera misy karazany maro
2.2 Taratasy, baoritra ary vera
2.3 Batterie, bateria ary fitaovana ao an-trano
Fampiasana fitaovana azo ampiasaina
Nilaza izahay fa ny fitaovana azo averina ampiasaina dia ireo izay azo ampiasaina aorian'ny fampiasana azy lehibe. Voalohany dia tsy maintsy manana fitsaboana teo aloha izy ireo antsoina hoe fanodinana. Na amin'ny endriny voarindra toy ny plastika dia nanao tavoahangy tamin'ny endriny madio indrindra antifreeze fiara na menaka, sanda vaovao azo alaina aorian'ny fizotran'ny fanodinana. Izany hoe, miverina amin'ny tsingerin'ny fiainana ireo vokatra izy ireo.
Ity karazana fitaovana ity dia tsy voatery ho lasa fitaovana hafa indray aorian'ny fizotrany fanodinana. Ny sasany voaverina amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny fampiasana amin'izao fotoana izao ary voatahiry hatramin'ny farany avo lenta na hiteraka angovo. Iray amin'ireo tranga mahazatra indrindra amin'ny ny famokarana angovo amin'ny alàlan'ny fanodinana dia biomass de plant. Ny biomassa legioma dia ampiasaina indrindra amin'ny famokarana solika. Ny faritra tsy azo hanina amin'ny zavamaniry dia azo averina mamboarina hamokarana angovo amin'ny alàlan'ny fandoroana na amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ireo solika ho an'ny famokarana biofuel izay hampiasaina amin'ny fiara na mpamokatra herinaratra.
Fitaovana azo ampiasaina hafa azo ampiasaina araka ny sary mahazatra ao an-tsaintsika. Amin'izany no ahafahantsika mampiasa tavoahangy plastika hamerenana ireo tavoahangy plastika hafa avy amin'izy ireo. Ny iray amin'ireo fitaovana azo ampiasaina azo ahodina indrindra dia ny vera. Ny tavoahangy fitaratra dia azo averina mivaingana tanteraka.
Fametrahana tahiry azo haverina
Raha vantany vao fantatsika hoe inona ny karazana fampiasana ananan'ireo fitaovana azo averina ampiasaina, dia ho hitantsika hoe inona izany. Noho ny fandrosoana ara-teknolojia ankehitriny dia manana lisitr'ireo fitaovana azo averina ampiasaina isika izay azo ampiasaina amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Na izany aza, Indraindray hitantsika fa manana ny fako ao anaty kaontenera tsy mety isika ary tsy azo atao ny mampiasa manaraka. Ohatra, misy fitahirizana fitaratra sasany toy ny fitaratra fitaratra eo am-baravarankely ao anaty fitoeran'ny fitaratra. Ireo fitaovana ireo dia tsy azo haverina tahaka ny fanaonay amin'ny tavoahangy fitaratra.
Andao hojerentsika hoe inona avy ireo fitaovana azo averina simbaina:
Plastika sy kaontenera misy karazany maro
Ny kaontenera isan-karazany, na biriky, kaontenera misy alimo ary kapoaka aliminioma dia azo averina alamina ao anaty kaontenera mavo. Ny bosoa polystyrene fotsy koa dia fitaovana azo averina ampiasaina izay tsy maintsy apetraka ao anaty kaontenera mavo. Na izany aza, raha mampiasa kidoro voajanahary isika dia tsy maintsy apetraka ao anaty kaontenera volondavenona izay alehan'ny organika io. Araraka ao anaty mavo ireo satroka plastika na dia vera aza ny tavoahangy sisa. Izany hoe, atsofoka ao anaty kaontenera mavo ny satrony plastika ary ny sisa tavela ao anaty kaontenera maitso.
Taratasy, baoritra ary vera
Mazava fa azo ampiasaina ireo karazana fitaovana telo ireo. Manomboka amin'ny ravina iray mankany amin'ny fitoeram-baoritra iray dia tsy maintsy apetraka ao anaty kaontenera manga isika. Izy io dia manana taham-pako fanodinana lehibe ary azo ovaina indray ho toy ny inona io na vokatra hafa.
Ny vera no fitaovana azo averina madiodio indrindra. Azo ampiasaina tanteraka noho ny fizotran'ny recast. Mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny aliminioma, ny fomba azo averina imbetsaka araka izay ilaina. Amin'ny aliminioma, mihena hatrany ny kely azo. Noho izany, zava-dehibe ny fanodinana vera ary arotsaka ao anaty kaontenera maitso. Tokony hamafisina fa ny solomaso kristaly na ny kristaly misy ny tombony sy ny fitaratra dia tsy miditra ao anaty kaontenera maitso. Ity kristaly farany ity dia manana oksida mitarika izay midika fa raha te handrendrika izy dia tsy maintsy atao amin'ny hafanana hafa noho ny fitaratra ary tsy azo averina averina mitovy amin'ny azy. Noho io antony io, ny vera dia tsy tokony apetraka ao anaty kaontenera fitaratra, tsy misy filaharana loko volondavenona miaraka amin'ny fako biolojika sisa. Toy izany koa ny porselana, lovia, kaopy sns.
Batterie, bateria ary fitaovana ao an-trano
Misy fitaovana azo averina amboarina maromaro izay tsy dia fantatra loatra izay hatao amin'izy ireo. Zava-dehibe ny famerenana amin'ny laoniny tsara ny fitaovana teknolojia sy ny bateria mamelona azy ireo. Tsy maintsy raisina fa noho ny fitomboan'ny haitao dia mihabetsaka izao karazana fako izao. Araka izany, zava-dehibe ny fahalalana tsara ny toerana tokony hamerenany. Izany rehetra izany dia apetraka amin'ny toerana madio, na dia misy kaontenera manokana ho an'ny bateria aza. Misy teboka madio maro any an-tanàna sy amin'ny toerana sasany toy ny tsena izay misy kaontenera bateria matetika.
Raha tsy izany dia azonao atao ny mitondra ny toerana misy anao na ny valan-javaboary misy anao mankany amin'ny ecopark. Ny fako sasany toy ny fantsom-pahazavana na kojakoja kely dia azo apetraka ao amin'ny teboka madio finday mba tsy hahafahantsika mihetsika be loatra. Zava-dehibe ny fahafantarana ireo fitaovana azo averina simba nanomboka teo ny sasany amin'izy ireo dia manana akora manimba izay afaka mifantoka amin'ny tany. Ny orinasa dia misafidy ny hampiasa singa maro kokoa izay azo ampiasaina indray hampihenana ny fanjifana ny akora sy ny vidin'ny famokarana ambany. Ireo fitaovana tsy azo averina namboarina dia nanisa ny androny. Ary ny an'ny Vondrona eropeana dia misy fandrarana ny famoronana fitaovana izay tsy azo averina alohan'ny 2020.
Mampiroborobo ny fampiasana fitaovana azo averina ampiasaina ny teknolojia sy ny lalàna mifehy, noho izany tsy maintsy manatanteraka ny anjara asantsika sy mandray anjara amin'ny fisarahana sy fametrahana zavatra tsirairay ao anaty fitoeran-javatra mifanaraka aminy. Amin'izany fomba izany dia manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana akora mahazatra izahay ary mandray anjara amin'ny fampihenana ny fiovan'ny toetrandro.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo fitaovana azo averina mamboarina, ny toetrany ary ny toerana tokony hametrahana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Fitaovana azo ahodina